Madax-Furasho Miyaa La Siiyay Xubnihii Haystay Silvia Romano? - Awdinle Online
Madax-Furasho Miyaa La Siiyay Xubnihii Haystay Silvia Romano?
Iyada oo aan wali la xaqiijin qaabka loosoo daayey Silvia Constanzo Romano ayna jiraan warar sheegaya in lacag madax-furasho la bixiyey, haddana waxaa leysku raacay in saddex qaab loo maray soo daynta haweynaydaan.
Ku dhowaad 18 bilood oo ay lahayste ku ahayd Gobolka Shabeellaha hoose, Silvia Constanzo Romano ayaa Sabtidii todobaadkan dib u heshay xorriyadeeda,waxaana Axadii ay ka dagtay dalka Talyaaniga iyada oo dhoolacadaynaysa.
Warbaahinta wadankeeda Talyaaniga ayaa aad ugu mashquulay dareeskeeda oo ay ku sifeeyeen “labis Soomaali” maadaama ay xijaabneyd markii ay ka dagtay dalkeeda iyo markii ay ka baxaysay Soomaaliya intaba.
Qaarkood waxay ay qoreen in ay Islaamtay, balse wali iyaddu ka ma hadlin in ay Soomaaliya ku soo Islaamtay iyo inkale,waxaana Xogta la haayo ilaa hada ay muujinaysaa in ay qaadatay diinta Islaamka.
Mas’uuliyiinta Talyaaniga ayaa u mahadceliyey sirdoonka Turkiga, Soomaaliya iyo mukhaabaraadkooda kuwaasoo iska kaashaday sii deynta gabadhaan sama falaha aheed.
Anadolu Agency Wakaaladda wararka ee dalka Turkiga ayaa ku warantay in mukhaabaraadka dalalka Soomaaliya iyo Turkiga ay gacan ka geysteen soo badbaadinta Silvia Constanzo Romano kadib codsi ka yimid xukuumadda Roma.
December 2019 ayay ahayd markii Talyaaniga uu codsigaas u gudbiyey Turkiga, sidda uu baahiyey Telefishinka TRT, kaas oo soo bandhigay saddex talaabo oo sirdoonka Turkiga qaadey kadib dalabka Italy ee soo daynta Gabadhaan.
in sirdoonka Turkiga uu u kuur-galay xaaladda Romnano, isla markaana uu xaqiijiyey in ay nooshahay.
in la howlgeliyey sirdoon maxali ah oo baadigoobay meesha rasmi ahaan lagu hayo gaabadhaan.
in howlgal wadajir ah ay qaadeen sirdoonka Soomaaliya, Turkiga iyo Talyaaniga, kaas oo Sabtidii lagu soo badbaadiyey haweenaydan ka shaqeysa samafalka.
“Howlgalka badbaadinta waxaa uu dhacay intii u dhaxeysa 8-9 May,” ayaa lagu yiri warbixinta lagu daabacay telefishinka ku hadla afka dowladda Turkiga, oo aanan soo hadal-qaadin wararka ku saabsan in lacag la bixiyey.
Bishii November ee 2018-kii ayay ahayd markii Romano laga watay tuulada Chakama ee koonfur-bari ee Kenya. Tan iyo waqtigaas, ma jirto koox sheegatay qafaalashadaas, balse waxaa aagaas ku xoogan Al-Shabaab.
Saraakiisha Amaanka Soomaaliya ayaa sheegay in gabadhaan lagu haayay Duleedka degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellah hoose,halkaas oo ay Maamulkaan Xoogga gacan saarka la leh Al Qaacida ee Al Shabaab in kasto oo aysan xaqiijin qaabka loo maray soo dayntiida gabadhaan.
Dowladda Faderaalka Soomaaliya wali mabixin faahfaahin rasmi ah oo la xariirta soo daynta Silvia Constanzo Romano, hadii lacag lagu bixiyay iyo kaalinta Dowladda ee Soodaynta Gabadhaan u dhalatay Talyaaniga ee laga soo afduubtay waqooyi Bari Kenya.
Previous articleLabo qof oo dumar ah oo lugu dhaawacay Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir
Next articleCiidamo ka soo goostay Jubbaland oo isu dhiibay Al-Shabaab